I-Galaxy 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Isithombe nomsindo
AbakwaSamsung bethule ukubheja kwabo kokuqala ekugcineni kwezwe ngocingo oluphathwayo ezandleni ze- I-Galaxy Z Flip futhi kusuka kububanzi I-Galaxy S20, ububanzi obunamamodeli amathathu. Lapho uthenga ama-terminals, uma ufuna uhla oluphakeme kakhulu olutholakalayo, emakethe namuhla sithola izindlela ezimbili kuphela ezinokwenzeka: I-S20 Ultra ne-iPhone 11 Pro Max.
Asikwazi ukufaka i- I-Huawei Mate 30 Pro IHuawei, ngoba ayisiniki izinsizakalo zeGoogle, ngakho-ke izinketho ezisinikeza zona ngokusebenziseka ancishiswe kakhuluYize lezi zingafakwa ngaphandle kwenkinga, noma kungewona wonke umuntu onolwazi lokwenza lokho.
1 I-Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
3 Amakhamera nevidiyo
4 Amandla, i-RAM nokugcina
6 Yikuphi okungcono?
I-Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
Indlela esheshayo yokuthola umbono walokho i-Galaxy S20 Ultra ne-iPhone 11 Pro Max abasinikeza kona kungokusebenzisa itafula, itafula lapho singakwazi khona ngokushesha ubone izici eziyinhloko ngayinye kulawa matheminali nokuthi siwaphula ngezansi.
Isikrini AMOLED angu-6.9-intshi 6.5 intshi OLED
Isinqumo 3.200 × 1.440 k 2.688 × 1.242 k
Umseshi ISpapdragon 865 / Exynos 990 I-A13 i-Bionic
Isitoreji sangaphakathi I-128-512 GB UFS 3.0 64-128-256 GB
Ikhamera yangemuva 12 mpx engela ebanzi / inzwa ye-TOF / 108 mpx main / 48 mpx telephoto zoom 10x optical kanye 100x hybrid I-12 mpx engeli ebanzi / i-12 mpx i-engeli ebanzi kakhulu / i-12 mpx lens lensiso 2x zoom
Ikhamera yangaphambili 40 mpx 12 mpx
Isistimu yokusebenza I-Android 10 ene-One UI 2.0 iOS 13
Ibhetri I-5.000 mAh - isekela ukushaja okusheshayo nokungenantambo I-3.969 mAh - isekela ukushaja okusheshayo nokungenantambo
Conectividad I-5G - i-Bluetooth 5.0 - i-Wifi 6 - i-USB-C I-4G - iBluetooth 5.0 - Wifi 6 - Ukuxhumeka kombani
Ukuphepha Inzwa yezigxivizo zeminwe ngaphansi kwesikrini I-Face ID
Intengo kusuka ku-1.359 euros (128 GB) kusuka ku-1.259 euros (64 GB)
Ngenkathi i-iPhone 11 Pro Max iqhubeka nokubheja, unyaka wesithathu olandelanayo ku- notch ukuhlanganisa uhlelo lokuqaphela ubuso, AbakwaSamsung basinika ukuthi bakhethe ukushintsha indawo yekhamera engaphambili, beyihambisa esikhungweni esiphezulu sesikrini (ku-S10 bekungakwesokudla).
Isikrini se-iPhone sifinyelela kuma-intshi angu-6,5 ngesinqumo sohlobo lwe-2.688 × 1242 OLED (olwenziwe yi-Samsung) futhi sinezinga lokuvuselela lama-Hz angama-60. × 20 resolution kanye isilinganiso sokuvuselela esingu-120 Hz.
I-iPhone 11 Pro Max ibe yindawo yokuqala ye-Apple ukusebenzisa i-angle ebanzi, ngaleyo ndlela engeza kumalensi amabili asevele enikelile iXS MAX yenza okuphelele kokuthathu:
I-12 mpx engela ebanzi kakhulu
I-12 mpx lens lens ene-2x zoom optical
Izinketho zokuqoshwa kwevidiyo ze-IPhone 11 Max Pro zikhawulelwe ku-4K kuma-60fps
I-Samsung, ngakolunye uhlangothi, ibuye isebenzise 3 ku-Galaxy S20 Ultra futhi ifaka inzwa ye-TOF ukukala ukujula. Inzwa enkulu ifinyelela ku-108 mpx, i-angle ebanzi yi-12 mpx kanti i-telephoto ingama-48 mpx ehlanganisa ukusondeza kwe-10x optical kanye ne-zoom eyi-100x hybrid. Uma sikhuluma ngevidiyo, lonke uhla lwe-Galaxy S20 lusivumela ukuba siqophe amavidiyo ngekhwalithi engu-8k, mhlawumbe ngama-fps angama-30 ngoba le datha ayikacaciswa
Amandla, i-RAM nokugcina
Ngaphakathi kwe-iPhone 11 Pro Max, sithola iprosesa ye-A13 Bionic, iprosesa efanayo esingayithola nakuzo zombili i-iPhone 11 Pro kanye ne-iPhone 11. I-Samsung nayo isebenzisa iprosesa efanayo kuwo wonke amamodeli ayingxenye yohlu olusha 20, kepha ehlukanisa ngokwamazwekazi lapho ithengiswa khona.
Yize zombili ezaseMelika nezaseChina, zisebenzisa iQualcomm's Snapdragon 865, eYurophu nakwamanye amazwe, iSamsung isebenzisa i-Exynos 990, eyenziwe yinkampani yaseKorea. Ngokombono, bobabili abaprosesa banikela ngokusebenza okufana kakhulu, noma kunjalo ama-processor ka-Qualcomm sIhlale inikela ngokusebenza okungcono maqondana nokusetshenziswa kwebhethri.
Uma sikhuluma nge-RAM, i I-iPhone 11 Pro Max ine-4 GB, ngaphezu kokwanele ukuhlanganiswa ne-iOS 13, inguqulo yakamuva ye-iOS etholakalayo namuhla. I-Samsung, ngokwengxenye yayo, isinikeza ukumiswa okuhlukile kwe-RAM kuye ngokuthi imodeli iyi-4G noma i-5G. Ngenkathi amamodeli we-S20 ne-S20 Pro 4G ephethwe yi-8 GB ye-RAM, inguqulo ye-5G ihambisana ne-12 GB ye-RAM.
I-Samsung Galaxy S20 Ultra itholakala kuphela kuhlobo lwe-5G futhi ihambisana ne-16 GB ye-RAM. I-Apple ayikadedeli ayikho i-iPhone enobuchwepheshe be-5G.
Uma sikhuluma ngokugcina, i-Apple ikhombisa futhi, unyaka owodwa, lokho iyindlala kakhulu ngokwendawo yokugcina, ngoba inguqulo eyisisekelo iqala kusuka ku-64 GB, ngezinguqulo ezingama-256 no-512 GB. AbakwaSamsung, njengonyaka odlule, basinikeza inguqulo eyisisekelo engu-128 GB, enenketho kwenye ye-512 GB kanye nethuba lokukhulisa indawo yokugcina usebenzisa ikhadi le-MicroSD, inketho i-iPhone 11 Pro Max enganikeli ngayo.
Uhlobo olushibhile kakhulu lwe-iPhone 11 Pro Max ingxenye ye- 1.259 euros futhi isinikeza ama-64 GB isitoreji, kuyilapho i-Galaxy S20 Ultra, kunguqulo yayo eshibhe, ingxenye yefayela le- I-128 GB yama-euro angu-1.359.
Womabili la matheminali amnandi futhi asinikeza ikhwalithi kusigaba sezithombe nevidiyo futhi maqondana namandla nokusebenza esingeke sikuthole kwamanye amatheminali. Lapho uthatha isinqumo nge-terminal eyodwa noma enye, kufanele sicabangele imvelo ukuthi sidale ekhaya lethu.
Uma amalungu omndeni wakho esebenzisa i-Android, maningi amathuba okuthi ube nesipikha esihlakaniphile esivela kuGoogle noma i-Amazon. Kulezi zimo, inketho enhle kakhulu imodeli ye-Samsung. Kodwa-ke, uma i-iPhone ibusa ekhaya lakho naphakathi kwabangani bakho, kusobala ukuthi inketho engcono yokuhlala ngaphakathi kombuthano yi-iPhone 11 Pro Max. Khetha i-terminal oyikhethayo, impela ngeke udumazeke.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » I-Galaxy 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max
Ungayilawula kanjani indlu yakho usebenzisa imali encane